Mushkilad ka dhex taagan kooxda Napoli iyo xidiga Gonzalo | Dhaliye
Published on August 3, 2015 by Mahad · No Comments	· 2,266 Reads
Gool dhaliyaha xulka qaranka Argentina iyo kooxda Napoli ee Gonzalo Higuain ayaa iska diiday inuu wax heshiis cusub ah u saxiixo kooxdiisa Napoli sida uu cadeeyay wakiilkiisu. Higuain ayaa kooxda Napoli sanadkii 2013 kii kaga soo biiray dhinaca kooxda Real Madrid, waxaana xagaaga oo dhan si joogto ah loola xidhiidhinaya kooxaha horyaalka Ingiriiska ugu tunka wayn.
Inkasta oo uu wali Higuain kooxda Napoli uu kula jiro qandaraas ay ka hadhsan tahay saddex sano ayay kooxdiisu doonaysay inay ka kordhiso heshiis uu hadda kooxda kula jiro balse xidiga ree Argentina ayaa iska diiday inuu wax qandaraas cusub ah saxiixo.Kooxaha Mancehester United, Arsenal iyo Chelsea ayaa lala xidhiidhinayay inay diirada ku hayaan Higuain.
Higuain ayuu wakiil u yahay ninka ay walaalaha yihiiin ee Nicolas Higuain, wuxuuna wakiilkani uu caddeeyay in ayna Higuain qorshihiisa ku jirin inuu hadda Napoli ka tabo balse waxa uu intaa raaciyay inuu iska diiday inuu Napoli u kordhiyo hal sano oo dheeraad ah.Higuain ayaa qayb ka ahaa sababtii ay Argentina ugu guul daraystay Copa America wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii Argentina rekoodhayaasha ka qasaarisay.
Wakiilka Gonzalo Higuain ee Nicolas Higuain ayaa yidhi: “Toban maalmood ka hor waxaanu madax wayne Aurelio De Laurentiis kulan kula yeelanay Venice , wax kasta waanu ka hadalnay, wuxuu noo soo bandhigay heshiis kordhin hal sano ah, anaguna waxaanu u sheegnay in aanu heshiiskii hore uun sii wadi doono kaas oo dhacaya 2018 ka”. Wakiilkan ayaa sidan u sheegay Radio Crc.